Hawlaha ugu muhiimsan ee ozone
Ozone waxay leedahay shaqooyin badan, waxayna inta badan yihiin sidan soo socota: Jeermiska: Ka takhalus fayraska iyo bakteeriyada hawada iyo biyaha si dhakhso leh oo dhammaystiran. Sida lagu sheegay warbixinta baaritaanka, in ka badan 99% bakteeriyada iyo virus-ka biyaha ku jira ayaa lagu baabi'in doonaa toban ilaa labaatan daqiiqo gudahood marka ay jirto 0.05ppm re ...
Codsiga ozone iyo shaqada
Ozone, oo ah wakiilka oksaydh xoog leh, jeermis dilaha, wakiilka sifaynta iyo wakiilka kalitaliska, ayaa si ballaadhan loogu isticmaalay warshadaha batroolka, kiimikooyinka dharka, cuntada, dawooyinka, cadarka, ilaalinta deegaanka. Ozone waxaa markii ugu horeysay loo isticmaalay daaweynta biyaha sanadkii 1905, iyadoo la xaliyay tayada biyaha la cabo ...
macaamiisha Gacaliye, Welcome to site luqadda multi-of CO BNP Allena TECHNOLOGY., LTD (Aakhiro loo yaqaan Allena BNP) saarney. In May 2019, BNP Allena go'aansaday inuu furo website a multi-laguange, ku talo jiray inuu ka badan adduunka. Waxaan kaliya u dabaal-guuradii 20-aad noo sanadkii la soo dhaafay iyo jeclaan lahaa in Soshiyaaldimoqoraadiga ...
In 20-sano ee soo socota, waxaan sii wadi doonaa in ...
Si aad alaabta Allena BNP iyo aad u badan la heli karo in dunida oo dhan ka dhigi
Si aad alaabta Allena BNP iyo aad u badan la heli karo in dunida oo dhan ka dhigi, waxaan bilaabay qeybinta Allena BNP caalamiga ah ee 2014, oo ay ku jiraan suuq geynta, iibinta iyo adeegga macaamiisha.
Waxaan la siineysey matoorrada Allena macaamiisha badan oo si fiican u yaqaan
Tobaneeyo sano, waxaynu ku siineysey matoorrada Allena macaamiisha badan oo si fiican u yaqaan, tusaale ahaan, Coca-Cola, Ting Hisin International, Danone, Desjoyaux, adeegaya 60% ka mid ah codsiga Allena ganacsi ee suuqa guryaha.
Sida Shiinaha noqday "warshad adduunka"
Sida Shiinaha noqday "warshad dunida", waxyaabaha aannu si tartiib ah u ogaaday customers.And adduunka oo idil ay u iibin jireen inay qaaradda kala duwan dunida dacaladeeda. Si aad alaabta Allena BNP iyo aad u badan la heli karo in dunida oo dhan ka dhigi, waxaan bilaabay qeybinta Allena BNP caalamiga ah ee 2014, oo ay ku jiraan suuq geynta, iibinta ...
Sano oo shaqo adag ayaa bixiyay
Sano oo shaqo adag ayaa bixiyay, codsi Allena la aqbalo fileds kala duwan iyo matoorrada Allena our ayaa sidoo kale loo aqoonsaday waxyaabaha aadka la isku halayn karo leh qaab aad u fiican in Shiinaha.